Nosakanan’i Rosia ny fidirana amin’ny tranonkala Tor · Global Voices teny Malagasy
Rosia no manana mpiserasera Tor faharoa betsaka indrindra manerantany
Voadika ny 18 Desambra 2021 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, Italiano, македонски, English
Voasakana ny tranonkalan'ny Tetikasa Tor ao Rosia. Sary avy amin'ny The Tor Project, CC BY 3.0 US.
Nosakanan'ny manampahefana Rosiana ny fidirana ao amin'ny tranonkan'ny Tor, torproject.org tamin'ny Alarobia 8 Desambra, araka ny tatitra avy amin'ireo mpandrafitra (developera) sy mpiserasera ao amin'ny Tor. Nitranga ny fanakanana ofisialy taorian'ny tatitra voalohany avy amin'ireo mpamatsy tolotra aterineto Rosiana tamin'ity herinandro (voalohany desambra) ity mikasika ny fanakanana ny fidirana ao amin'ny tolotra, ka tsy afaka niditra tao amin'ny tranonkalan'ny Tor Project ireo mpiserasera Rosiana sasany nanomboka tamin'ny 1 Desambra.
Tetikasam-pikarohana novatsian'ny Navy Amerikana vola tany am-boalohany, tantanin'ny vondrona tsy mitady tombontsoa ara-bola ao Seattle, WA ankehitriny ny Tor, manome rindrambaiko ahafahan'ireo mpiserasera mitety ny aterineto amin'ny fomba tsy mampiseho anarana. Tor (fanafohizana ny “The Onion Browser”) ary manivaka amin'ireo fameperana sy fanakananana aterineto napetraka ao an-toerana. Tsy mampiseho anarana amin'ny aterineto ny mpitety Tor amin'ny alalan'ny fandefasana izany amin'ny fikirakirana tokana amin'ny vona fantatra ho rafi-pamilian-dala tongolo.
Tombanana ho 300.000 ireo Rosiana mampiasa ny tolotra Tor isan'andro, izany hoe mandrafitra ny 15% eo ho eo amin'ireo mpiserasera Tor rehetra. Rosia no manana isa marobe faharoa amin'ny mpiserasera Tor manerantany.
Nilaza ny mpandrindra ny aterinetom-panjakana Rosiana fa nampiditra ny tranonkala Tor browser tao amin'ny rejistra misy ireo tranonkala voaràra izy noho izy voalaza fa nandefa “vaovao miantoka ny fiasan'ireo fitaovana izay manome fidirana amin'ny votoaty tsy ara-dalàna.” Araka ny filazan'ny vondrona zo ankihy Roskomsvoboda, ny mody anton'ny fanakanana dia ny fanapahan-kevitra tamin'ny taona 2017 noraisin'ny fitsarana ao amin'ny distrika Saratov voatonona tao amin'ny angon-drakitry ny Roskomnadzor (na dia tsy namoaka didy fanakanana ny tranonkala aza ny fitsarana). Tsy mazava ihany koa ny antony hoe maninona no taona 2021 vao nampiharina ny didim-pitsarana efa tamin'ny taona 2017.
Nanambara ny Tetikasa Tor fa mbola afaka mampiasa tolotra Tor ireo mpampiasa ao Rosia amin'ny fitsidihana ny fitaratra amin'ny tranonkala ampiantranoin'ny Electronic Frontier Foundation. Niantso ireo misera Rosiana hanara-maso ny fanakanana ny tolotr'izy ireo ihany koa izy io ary niantso ireo vondrona mpiaro ny zo ankihy mba hanery ny manampahefana Rosiana hampitsahatra ny sivana Tor.
Raha monina any Rosia ianao… ampio hamantatra ny sivana amin'ny aterineto amin'ny alalan'ny fanadihadiana @OpenObservatory
Raha miasa ho an'ny zo ankihy iraisam-pirenena na fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ianao… ampiharo ny fanerena amin'ny governemanta rosiana mba hanova avy hatrany io sivana io.
Ny fanakanana ny tranokalan'i Tor dia tonga tao anatin'ny famoretana nohavaozina tamin'ireo tambajotra tsy miankina virtoaly (VPN) sy ireo fitaovana hafa anjotra manafina anarana ao Rosia, izay lazain'ny manampahefana fa mety hamela ny fidirana amin'ny votoaty anjotra tsy ara-dalàna izay manitsakitsaka ny lalàna Rosiana. Tamin'ny Septambra 2021, tamin'ny alin'ny fifidianana parlemantera, nosakanan'i Rosia ireo mpamatsy VPN lehibe enina ary namoahana fampitandremana ireo orinasa tandrefana manolotra fitaovana toy ny servisy CDN sy DNS izay mamela ny mpisera hanivaka amin'ny sivana ataon'ny fanjakana Rosiana.
Ampahany amin'ny paikady “fiandrianana ara-aterineto” ao amin'ny firenena izay mikatsaka ny hanamafy ny fifehezan'ny fanjakana foibe ny fotodrafitrasa amin'ny aterineto sy ny sehatra anjotra ny fanerena hisian'ny sivana anjotra goavana kokoa. Ny fepetra “fiandrianana” no nahatonga ny fomba fiasa nivondrona kokoa amin'ny sivana sy fanakanana anjotra, mahatonga ireo mpamatsy tolotra aterineto ankehitriny voatery mametraka rindrambainga vaovao antsoina hoe “fomba ara-teknika hanoherana ny fandrahonana” ao amin'ny lalàna.
Fehezin'ny Roskomnadzor samirery sy ny andrim-panjakana hafa ity fitaovana ity ary mamela ny fanakanana tsy tambo isaina amin'ireo tranonkala izay sarotra kokoa ny manara-maso sy mandrakitra azy. Efa nahafahana nanakana sehatra toy ny Twitter, sy ny fanakanana feno ny tranokalam-pifidianana sy ny fampiharan'ny mpanohitra tamin'ny fiandohan'ity taona ity ilay rindrambainga.